BBC Somali - Hay'adeed - 404
Bogga lama heli karo,
Waan ka xun nahay!
Nasiib darro, bogga soo socda waa la waayay:
Fadlan hubi cinwaanka iyo higgaadda adigoo xaqiijinaya in aysan ku jirin xarfo waawayn ama meelo banaan. Waxaa dhici karta in bogga aad raadinayso laga yaabo in la raray, wax laga badalay ama la tirtiray.
• Fadlan isku day in aad raadiso bogga.
• Isticmaal barta sahminta ee dusha sare ee bogga.
• Dhex gal diiwaanka guud ee boggaga iyo adeegyadeena.
• Booqo bogga Dhag sii Dhag sii BBCSomali.com
• Noo soo gudbi taladaada